राजीनामा दिन्छु भन्दा प्रचण्डले गाली गर्नुभयो | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
राजीनामा दिन्छु भन्दा प्रचण्डले गाली गर्नुभयो
माघ २०, २०७५ आइतबार १२:४२:१८ | लाेकेन्द्र मल्लिक
संक्रमणकालीन घटनाहरु जतिसक्दो छिटो सक्नु पथ्र्यो, तर अझैसम्म पनि सकिएको छैन । २०६२/०६३ मा बृहत शान्ति सम्झौताबाट तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण भयो ।
१० वर्षे द्वन्द्वका बेला सरकार पक्ष र विद्राही पक्ष दुबैबाट व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम भयो । त्यही बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन हामीले जिम्मेवारी पाएका हौँ । हुन त यो सबै काम द्वन्द्व सकिएलगत्तै पहिले नै हुनुपर्ने थियो ।
तर ढिलै भए पनि सरकारले २०७१ माघ २८ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेर हामीलाई जिम्मेवारीमा खटायो । त्यसै अनुरुप हामीले पनि काम गरिरहेका छौँ । आयोगलाई सुरुमा दुई वर्षको समय पाएको थियो । तर २ वर्षमा काम सकिएन । ४ वर्ष लाग्यो अझै पनि सकिएको छैन । हामी आफै पनि दुखी छौँ ।
आयोगलाई सुरुमा दुई वर्षको समय पाएको थियो । तर २ वर्षमा काम सकिएन । ४ वर्ष लाग्यो अझै पनि सकिएको छैन । हामी आफै पनि दुःखी छौँ ।
हामी पनि सुरुमा नयाँ उत्साह लिएर आएका थियौँ । हामी आएर छिटो काम सकेर प्रतिवेदन बुझायौँ भने पीडितलाई पनि वर्षौंको जुन पीडा छ त्यो कम हुन्छ त्यसमा राहत हुन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यसै अनुसार काम गर्छौँ भन्ने जोश थियो ।
तर ऐन कार्यान्वयनका लागि आउनु पर्ने नियमावली आयोग गठन भएको १३ महिनासम्म पनि आउन सकेन । यसमा सरकारकै कारण ढिला हुन पुग्यो । त्यो समयमा पनि हामीले काम गर्न छाडेनौँ, आन्तरिक नियमावलीहरु बनायौँ । १३ महिनापछि बल्ल ऐन आयो । कर्मचारीको अभाव अहिलेसम्म पनि उस्तै छ । ५० प्रतिशत कर्मचारी पनि हामीले पाएनौं ।
नियमावली आएसँगै हामीले उजुरी आह्वानदेखि सबै काम अघि बढायौँ । र आजसम्मको अवस्थामा हामीले झण्डै ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ । ६५ वटा जिल्लाका अधिकांश समस्याको निराकरण हामीले गरेका छौँ । अब बाँकी ११ वटा जिल्लाको काम गर्न बाँकी छ । पछिल्लो पटक थपिएको आयोगको म्याद यही माघ २६ गते सकिने हो । तर सरकारले फेरि १ वर्षका लागि आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ ।
अब हामीलाई धेरै समय पनि चाहिँदैन । ६ महिनाको मात्रै समय दिए हुन्छ भनेका थियौं । सरकारले एक वर्षकै थप्ने निर्णय गरिसकेपछि अब अझै मसिनो गरि आएका उजुरीहरु केलाउने काम गर्छौँ । अहिले पनि २ वटा ऐनको अभाव छ । त्यसका लागि हामीले ड्राफ्ट तयार पारेर सरकारलाई बुझाइ सकेका छौँ । तर सरकारले ऐन ल्याउन सकेको छैन ।
पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कानुन ल्याउनु पर्ने छ । यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको कानुनी हैसियतका समबन्धमा ऐन बनाउनु जरुरी छ ।
प्रचण्डले गाली नै गर्नुभयो
हामीले पहिलो पटक थपिएको म्यादपछि पनि काम नसक्दा अब यहाँ बसिरहनु उचित छैन छाडौँ भन्ने सोच आएको थियो । हामी छाड्छौँ भनेर नै त्यसबेला सरकार प्रमुख र प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेट गर्‍याे।
प्रचण्डले त हामीलाई गाली नै गर्नुभयो । गाली यस कारण कि आयोग छाड्ने कुरा नगर्नुस भनेर । यस अर्थमा माया गरेरै त्यसो भन्नुभएको हो हुन त ।
त्यो क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोगको म्याद थपिन्छ । नछाड्नुस् भन्नुभयो । त्योसँगै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि हामीले भेट गर्‍याैँ । त्यो क्रममा उहाँहरुको कुरा पनि त्यस्तै रह्यो ।
प्रचण्डले त हामीलाई गाली नै गर्नुभयो । गाली यस कारण कि आयोग छाड्ने कुरा नगर्नुस भनेर । यस अर्थमा माया गरेरै त्यसो भन्नुभएको हो हुन त । उहाँले किन तपाईहरु आयोग छोड्ने, नछाड्नुस्, यस्तो काम नगर्नुस्, तपाइहरुले छाडे त आयोग नै खत्तम हुन्छ, आयोग नरहे त पीडितको पीडा कसरी सम्बोधन हुन्छ ? बरु अब छिट्टै सरकार बन्दै छ जे जे सहयोग चाहिन्छ हामी सहयोग गरौँला भनेर भन्नुभयो । त्यती भनेपछि हामी कार्यक्षेत्रमा लाग्यौँ ।
तर उहाँहरुले त्यति भन्दा पनि काम भने हुन सकेन । यो अवधिमा बरु जिल्ला जिल्लामा रहेका शान्ति समिति नै भंग हुने काम भयो । हाम्रो जिल्लासँगको सम्पर्क नै विच्छेद भयो यस पछि ।
हामीसँग एउटा कुरा गर्ने काम भने अर्को गर्ने गर्दा सरकारको भावना बुझ्न पनि कठिन हुन थाल्यो । नेतृत्व लिने नेताहरु त धेरै राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ । तर आवश्यक सहयोगको मामलामा भने खोई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सहयोग हुनै सकेको छैन ।
विदेशी हस्तक्षेप भए भयावह
जबसम्म आयोगहरु सफल हुँदैन तबसम्म शान्ति प्रकृया टुंगो पनि लाग्दैन र अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न पनि सक्दैन । शान्ति प्रकृया हाम्रो आफ्नै पहुँचबाट नसकिए विदेशी हस्तक्षेप हुने पनि संभावना त्यतिकै रहन्छ । त्यसैले हामी सबै मिलेर आन्तरिक रुपमा नै यो मुद्दा सल्टाउनु जरुरी छ । यो मुद्दा टुंगोमा पुर्याउन हामी नेपाली आफै पनि सक्षम छौँ । त्यसैले राजनीतिक दलहरुले पनि यसमा सहयोग गर्नु जरुरी छ ।
विदेशी हस्तक्षेप भए अवस्था भयावह हुन्छ । त्यो कुनै पनि नेपालीका लागि सहज हुँदैन । देश अझै प्रगतिको बाटोमा पछि पर्छ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो यसलाई टुंगोमा पुर्याएर विकाशको बाटोमा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ ।
हामीले पाएको म्याण्डेड अनुसार गर्ने हो भने दोषी देखिएकालाई चर्कै सजायको व्यवस्था पनि छ । तर त्यसरी गर्दै जाने हो भने त यो शान्ति प्रकृया टुंगिदैन, हेर्नुस् । संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त पूरा हुँदैन । त्यसका लागि देशमा अरु कानुन छँदैछ नि त ।
कसैले ज्यान मारिदिएको छ भने आजीवन कारावासको सजाय हुने व्यवस्था छँदै छ । त्यही कानुन लगाए नि भइहाल्यो नि । तर कुनै पनि देशमा द्वन्द्व भयो भने द्वन्द्वको समस्या समाधान गर्न सम्बोधन गर्न सक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले चर्को सजाय गरेर हुँदैन । त्यसका लागि केही फेरबदल चाहिँ गर्नुपर्छ ।
विदेशी हस्तक्षेप भए अवस्था भयावह हुन्छ । त्यो कुनै पनि नेपालीका लागि सहज हुँदैन । देश अझै प्रगतिको बाटोमा पछि पर्छ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो यसलाई टुंगोमा पुर्याएर विकाशको बाटोमा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । यसैमा अल्झेर बसे भावी सन्ततीले निकै दुःख पाउनेछन् ।
थपिएको समयमा पनि टुंगो लगाउन सकस
अब थपिएको समयमा पनि आयोगले ठोस निर्णय दिन्छ भन्ने आश कमै छ । अनुसन्धान गर्ने कर्मचारीको अभाव छ । भएका कर्मचारी पनि हेरफेर भइरहेको अवस्था छ । चार वर्षको अवधिमा ५ जना सचिव मात्रै फेरिए ।
अहिले आएर ४ वर्षको समय पनि अपुग भएको देखियो । हाम्रो कारणले नभई काम गर्ने वातावरण नै नहुँदा हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो । हामीलाई आवश्यक सबै कुरा दिइएको भए पहिले नै काम सक्ने थियौँ ।
आवश्यक ऐन ल्याउन हाम्रो प्रयास धेरै रह्यो । तर सरकारले कुन बाध्यताले ल्याएन भन्ने थाहा भएन । होला केही बाध्यता तर हामीलाई थाहा छैन । यदी यस्तै अवस्था रहने हो भने यो थपिएको समयमा पनि मुद्दाहरु टुंगो लाग्ने अवस्था छैन । किनकी टुंगोमा पुर्‍याउन आवश्यक पर्ने ऐन कानुन नै हो । त्यो ऐन कानुन नै नभए पछि कसरी मुद्दा टुंगोमा लाग्छ र ?
तर अहिलेसम्म आवश्यक पर्ने धेरै कुराहरु उपलब्ध छैन । तै पनि हामीले काम भने गरिरहेका छौँ । अब कानुन नबनाए पनि हामीले प्रतिवेदन दिएर त्यसका लागि यस्तो कानुन बनाउ भनेर सिफारिस गरेर काम टुंगो लगाइदिन सक्छौँ । अबको ६ महिना हामीलाई पर्याप्त रहन्छ ।
हामीलाई आएका उजुरीमध्ये झण्डै २५ सय ११ वटा उजुरीको विस्तृत अध्ययन टुंगो लगाएका छौँ । २१ सय ४९ वटा उजुरी लाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याएका छौँ । झण्डै ३ सय भन्दा बढी मात्रै अब अनुसन्धानको काम बाँकी छ । त्यसैले सबै व्यवस्था भए अबको ६ महिनामा काम सक्छौँ ।
(बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकसँग नवराज फुयाँलले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)
मल्लिक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिकाे छानविन गर्न गठित आयाेगकाे अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
जीर्ण कारागार, पाँच गुणा भार
दक्षिण कोरियामा कोरोनाको संक्रमण बढ्दो, नेपालीलाई सचेत रहन आग्रह
पोखरा फुटबल मैदान निर्माणको काम ८५ प्रतिशत सकियो
थाहा पाउनुहोस् आइतबार राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी मुद्राको व...
सुनको भाउ अहिलेसम्मकै महँगो, यही हप्ता ताेलाकाे ८० हजार पुग्...